i want to know clearly about CMS - MYSTERY ZILLION
i want to know clearly about CMS
April 2008 edited June 2010 in CMS
မှန်တာပြောရရင် CMS ဆိုတာ ဘာလဲ ကျွန်တော်သေချာမသိသေးဘူး ။ သိလည်းသိချင်တယ် ။ ဟိုနေ့က mmopenxteam မှာ ညွှန်းထားတာတွေ့လို့ SilverStripe CMS ကို download လေးဆွဲပြီး စမ်းကြည့်တာ တော်တော်လေး ကျွန်တော် နဲ့ မရင်းနှီးဘူးဖြစ်နေတယ်၊ Help Center မှာတောင်မေးဖြစ်သေးတယ် ၊CMS သုံးနည်းလေး အခြေခံလောက် ဖြစ်နိုင်ရင် ရေးပေးစေချင်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ ဒီ topic မှာ CMS ကိုဘာ လဲ လို့ မသိသေးသူတွေ အတွက် အခြေခံကစသိနိုင်အောင် ဆက်လက် ဆွေးနွေးစေလိုပါတယ် ။ အရင်က blog အရမ်းရေးချင်တုန်းက ကိုစေတန် ရေးထားတဲ့ MakingMyanmarBlog e-book လေးတွေ့လို့ အဆင် ပြေသွားဖူးပါတယ် ။ နောက်ပြီး HTML စာအုပ်လည်း ဖတ်ဖူးပါသေးတယ် ။ CSS ကိုလေ့လာတော့မယ်လို့ လုပ်ပြီးမှ CMS ကို စိတ်၀င်စားသွားတဲ့ ကျွန်တော့် ဒုက္ခက မသေးပါလား
CMS(Content Management System) ဆိုတာ Web application တစ်ခုပါ. HTML, CSS, PHP စတဲ့ web language တွေကို တစ်လုံးမှ နားလည်စရာမလိုပဲနဲ့ အဆင့်မြင့် Web Site တွေ ဖန်တီးနိုင်တဲ့ web application တစ်မျိုးပေါ့။ CMS တွေကိုသုံးပြီးများပြား တဲ့ Web Materials ( Web စာမျက်နှာတွေ၊ ပုံတွေ၊ ဒေတာတွေ၊ သတင်း information တွေ) ကို လွယ်ကူစွာ Manage လုပ်နိုင်ပါတယ်။ CMS skin template တွေသုံးပြီးတော့လည်း Web Site ရဲ့ Design, Layout, Themes တွေကို ကလစ်တစ်ချက် နှိပ်ရုံနဲ့ ပြောင်းလဲနိုင်တယ်။ အားလုံး Ready Maded ပေါ့ဗျာ၊ ကိုယ်က Manage လုပ်ရုံပဲလိုတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ Axiom ခင်ဗျား ၊ အခုလို ဖြေကြားပေးတဲ့ အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ၊
ကျွန်တော် က SilverStripe မှာ၀င်သုံးကြည့်တော့ Design,Layout တွေထဲ့လို့ရတဲ့ tools လေးတွေ
တော့တွေ့တယ်ဗျ ၊ စမ်းကြည့်တော့ အဆင်မပြေလို့ပါ၊ ကြည့်ရတာ ကျွန်တော်နဲ့ မရင်းနှီးသေးလို့နေ
မှာပါ၊ ဒီ forum ထဲမှာ တော့ Joomla ကို ညွှန်းထားတာတွေ့တယ် ၊ ဘယ်လိုလုပ်ရင် ကောင်းမလဲ
ကျွန်တော် ကို advice တွေများများပေးနိုင်မယ့် Joomla ပြောင်းသုံးကြည့်ရမလား ၊ အကြံလေးဘာ
Joomla နဲ့ ပတ်သက်ရင်တော့ ဒီမှာ Joomla ဆရာတွေ ရှိတယ်ဗျ။ ကို kham တို့ ကို phpcrazy တို့ထင်တယ် .. ရှင်းရှင်းပြောရရင် ကျွန်တော့် မှာ သူများကို အကြံပေးလောက်အောင် Joomla ကို အတွေ့အကြုံမရှိပါဘူး .. MZ ကညီကိုတွေ ညွှန်းလို့သာ နောက်မကျရအောင် အပြေးစမ်းလုပ်ဖူးတာ .. ကျွန်တော်ပြောနိုင်တာက CMS အပိုင်း လုပ်မယ်လို့ ကြံရွယ်ရင်တော့ Joomla ကိုလဲ သိအောင်လုပ်ထားသင့်ပါတယ် .. မသိတာရှိရင်တော့ ကို kham နဲ့ ကို phpcrazy တို့ကိုမေး ဘာမှ အားနာစရာမလိုဘူး .. :68:
MZ ကညီကိုတွေ ညွှန်းလို့သာ နောက်မကျရအောင် အပြေးစမ်းလုပ်ဖူးတာ ..
အဲဒါ အရေးကြီးတယ်ဗျ internet ခေတ်ကြီးထဲမှာ နောက်ကျလို့မရဘူးဗျ ။ ကျွန်တော် တောင် မမှီ မှီရာကနေ ဒရွတ်တိုက်ဆွဲပြီးကို လိုက်နေတာ ၊ အားပေးတယ် ဆက်လေ့လာပါဗျို့၊ ပီးရင် မျှပါအုံး
Joomla ကတော့ ပြောင်းသုံးကြည့်ဆိုတာထက် စမ်းသုံးကြည့်စေချင်ပါတယ်... မဆိုးဘူးဗျ... သုံးရတာလွယ်တယ်... ဒါပေမယ့် တချို့တွေက မကြိုက်ကြဘူး.. powerful မဖြစ်လို့... ဒါမှမဟုတ် ထိန်းချုပ်ထားလွန်းလို့... လွယ်လွန်းလို့... အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းတွေကြောင့် မကြိုက်ကြပါဘူး.. ကျွန်တော်ကတော့ ကြိုက်တယ်ဗျ.. တခြား CMS တွေ သုံးကြည့်တာ အဲလောက်မမိုက်သလိုပဲ...
CMS လို့ ပြောလိုက်ရင် Joomla လို့ပြေးမြင်တဲ့အထိ Joomla က ပေါက်တယ်ဗျ။ စမ်းသုံးကြည့်စေလိုပါတယ်။
ကျွန်တော်လည်း အခု စမ်းနေတုန်းပဲ။ ကောင်း , မကောင်းတဲ့ သိသေးဘူး။
အညွှန်းကောင်းလို့ ကျွန်တော်လည်း joomla ဖြစ်သွားပြီ ...ဟဲ...ဟဲ.....open library ကနေ joomla အတွက် ebook လေး လည်းရထားသေးတယ်ဗျ၊ အချိန်တော့ပေးရလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်
Yes, i aslo interested to do web page by myself ...
I'm new member ,,and i don't know nothing about so i want to fri with all
နားလည်စရာမလိုပဲနဲ့ အဆင့်မြင့် Web Site တွေ ဖန်တီးနိုင်တဲ့ web application တစ်မျိုးပေါ့။ CMS တွေကိုသုံးပြီးများပြား တဲ့ Web Materials ( Web စာမျက်နှာတွေ၊ ပုံတွေ၊ ဒေတာတွေ၊ သတင်း information တွေ) ကို လွယ်ကူစွာ Manage လုပ်နိုင်ပါတယ်။ CMS skin template တွေသုံးပြီးတော့လည်း W
safdasfd asfadsfasdfa asdfads
zpkyaw wrote: »
Don't spam the forum. Reported.
အခု ကျွန်တော် joomla ကို installed လုပ်ပြီးသွားပြီး
ဒါပေမဲ့ အထဲမှာ ပါတဲ့ joomla ဆိုတဲ့ logo ကို ကျွန်တော် site name ပုံ ပြောင်းချင်တာ
hteinwin wrote: »
Site Banner ကို change ချင်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အဲဒါဆိုရင်တော့ template_css.css ထဲမှာ banner image ကိုပြောင်းပေးရပါမယ်။
#header ကိုရှာလိုက် template_css.css ထဲမှာ ပြီးရင် background နေရာမှာ ကိုယ့် Site Banner Image ကိုထည့်ပေးလိုက်ရင်ရပါပြီ။:)
*** ကိုယ့် select လုပ်ထားသော template ရဲ့ template_css.css ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။
Joomla ကို စလုပ်မယ်ဆိုရင် 1.5 ကိုချနော်။ ခုနောက်ပိုင်း component, module, plug-in အားလုံးက joomla 1.5 အတွက်ပိုများတယ်။ ကျွန်တော်လို ဖြစ်မှာ စိုးလို့ စေတနာနဲ့ သတိပေးတာပါ။ ကျွန်တော် Site ကို Joomla 1.0 နဲ့ စလိုက်တာ ခုလည်းကြရော component, module, plug-in တွေအရှာရတော်တော်ခက်နေတယ်။ 1.5 ကို change လို့ရပေမယ့် Database ထဲက content data တွေကိုဘယ်လို migrate လုပ်ရမလဲ မသိဖြစ်နေပြန်ရော။
ဒါကြောင့် 1.5 ကိုသုံးစေချင်တာပါ။
CMS ဆိုတာ ဘာအတွက်သုံးတာလဲဗျာ့ ။
ကျွန်တော် က ကျောင်း project မှာ Social Networking System လုပ်ရမှာပါ ။ ခက်တာက ပထမကျွန်တော် က joomla တို ့ပုံစံမျိုုးနဲ ့ပဲ Social Networking System ကိုလုပ်နှိင်မယ် ထင်တာ .. ။ နောက်ပြီးကျောင်းမှာက Java နဲ ့ပဲ ရေးရမှာပါ .. ။ ရှာလိုက်တော့ OpenCMS နဲ့dotCMS နှစ်ခု တော့ တွေ ့တယ် .. (open source) ထဲကပါ ။ အခုက HTML တို ့ဘာတို ့တောင် သိဖို ့မလို ပဲ လုပ်လို ့ရတယ် လို ့ပြောနေကြတော့ တစ်ကယ် လို့OpenCMS နဲ ့သုံးပြီးရေးမယ်ဆိုရင်တောင် Valid ဖြစ်ပါ့မလား .. ။
ကျွန်တော် က CMS နဲ ့ပတ်သတ်ပြီး ဘာအတွေ ့အကြုံ မှ မရှိပါဘူး ။ .. ဖြစ်နှိင်ရင် မြန်မြန်လေး ရှင်း ပြကြပါ .. အဲဒီ CMS ဆိုတာကြီးကို ..
ဘာအတွက်အသုံးပြုကြတာလဲဆိုတာ .. ...
CMS ကတော့ content management system တစ်ခုဖြစ်ပြီး အဓိက content များကို management လုပ်ရုံပဲလေ။ programming မတတ်တဲ့သူတွေအတွက် လွယ်လွယ်ကူကူ site တစ်ခု တည်ဆောက်နိုင်အောင် အကူအညီပေးတယ်။ dynamic ဖြစ်တဲ့အတွက် ပြင်ရလွယ်တယ်။ Java CMS တွေတော့ တစ်ခါမှမသုံးဖူးပါ။
အခုက HTML တို ့ဘာတို ့တောင် သိဖို ့မလို ပဲ လုပ်လို ့ရတယ် လို ့ပြောနေကြတော့ တစ်ကယ် လို့OpenCMS နဲ ့သုံးပြီးရေးမယ်ဆိုရင်တောင် Valid ဖြစ်ပါ့မလား .. ။
အဲဒါကို နားမလည်ဘူးဗျ။ ဘာကိုပြောတာလဲမသိဘူး။
အကို blogger တို့ ning.com တို့ကိုတော့ သုံးဖူးမှာပေါ့။ အဲဒါလေးတွေနဲ့ အင်တာနက် စာမျက်နှာ တစ်ခုလုပ်ဖို့ဆိုရင် web programing တစ်ခုမှ မတတ်လည်း ရတယ်။ ယုတ်စအဆုံး html မတတ်လည်း လုပ်လို့ ရပါတယ်။ အားလုံးက သူ့နေရာနဲ့ သူအသင့်သုံးလိုက်ယုံပါပဲ။
CMS ဆိုတာလည်း အဲဒီသဘောပါပဲ။ web programing တစ်ခုခုကို နည်းနည်းပါးပါးလေး တီးခေါက်မိယုံနဲ့ သုံးလို့ ရတယ်။ blogger တို့ ning.com တို့နဲ့ ယှဉ်ရမယ် ဆိုရင်တော့ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကတော့ အရမ်းကို များပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ blogger တို့ ning.com တို့လိုတော့ လုပ်ချင်တိုင်း လွယ်လွယ် ကူကူ လုပ်လို့ မရတော့ပါဘူး။ အရင်ဆုံး ကျွန်တော်တို့ အင်တာနက်မှာ ကျွန်တော်တို့ လုပ်ချင်တဲ့ အင်တာနက်စာမျက်နှာ တစ်ခု ထားဖို့အတွက် နေရာလိုလာပါပြီ။ အဲဒီအတွက် ဖရီးပေးတဲ့နေရာတွေ ရှိသလို ပိုက်ဆံပေးရတဲ့ နေရာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ များသောအားဖြင့် အားလုံးက ပိုက်ဆံပေးရတဲ့ နေရာတွေမှာပဲ တင်ကြပါတယ်။ ဖရီးပေးတဲ့နေရာတွေမှာ စမ်းသပ်သူတွေလောက်ပဲ သုံးတာများပါတယ်။ ပိုက်ဆံဆိုတဲ့နေရာမှာလည်း hosting ပေးတဲ့ ကုမ္ပဏီအလိုက် သူ့ ၀န်ဆောင်မှုနဲ့ သူ စျေးအမျိုးမျိုး ရှိပါတယ်။ အဲဒီလို နေရာတစ်ခု ရပြီဆိုရင် အဲဒီမှာ CMS ဆိုတဲ့ ဟာလေးကို သူ့ instruction အလိုက် run ပေးလိုက်ရတာပါ။ အဲဒါဆိုရင်တော့ blogger လို ning.com မှာလို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပြီး သုံးစွဲ နိုင်ပါပြီ။
Valid ဖြစ်ပါ့မလားဆိုတာက အင်တာနက် စာမျက်နှာ အစစ်ဖြစ်ပါ့မလားကို မေးတာထင်တယ်။
အဲဒါဆိုရင်တော့ MZ ကို သာကြည့်ပေတော့။ သူက Vbullentin ဆိုတဲ့ CMS ကို သုံးထားတာပါ။
myanmarinternetjournal.com ကို Joomla နဲ့ ရေးထားတာပါ။
ဖိုရမ်က အက်ထမင်ကြီး စေတန်ရဲ့ ဘလော့လေးကို wordpress နဲ့ ရေးထားတာပါ။
ဒီလောက်ဆိုရင် CMS ဆိုတာ ဘာလဲ။ ဘယ်လို အသုံးကျလည်းဆိုတာ သိလောက်ပြီ ထင်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ project ၂ ခုက social networking system ပဲ။ PM ပြောတာကတော့ ရှင်းတယ်။ followed by facebook တဲ့။ ဘာတွေပါရမလဲ။ ဘာလုပ်ရမလဲ။ ထွေထွေထူးထူးပြောစရာမလိုတော့ဘူး။ facebook နဲ့ အတတ်နိုင်ဆုံး တူအောင်လုပ်။ facebook က အပြည့်စုံဆုံးနဲ့ အအောင်မြင်ဆုံး social networking site ပဲ။ ning ကိုတော့ မကြည့်နဲ့။ သူက social networking site လို့ မပြောနိုင်ဘူး။ သူက CMS သာသာပါပဲ။ Social Networking site က အစကနေ ဆွဲတာ အမြန်ဆုံးပဲ။ ဘာ design တွေဘာ flow တွေမှလည်း ခက်ခက်ခဲခဲ စဉ်းစားစရာ မလိုဘူး။ followed by facebook ပဲ။ facebook ထဲမှာ ကိုယ်လုပ်နိုင်သလောက် လုပ်ပေါ့။ အကုန်လုံး တူအောင်တော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။
အားလုံးက Air Ticket Sale တို ့Library System တို ့Job Vacancy Search System တို ့ရေးကြတာလေ ။ သူတို ့ဆို လုံး၀ အစကနေ စရတာမဟုတ်လား ။ အဲဒါပါ ။ Supervisor ကိုလဲမေးကြည့်ပြီးပါပြီ ။ သူကတော့ လုံး၀ အစကပဲ စ စေချင်တယ်တဲ့ ။ ကျွန်တော်တို ့က Social Networking System ကိုရွေးထားတာပါ ။
Air Ticket Sale တို့ Library တို့အတွက်လည်း ရေးပြီးသားတွေ ရှိပါတယ်။ လွယ်လွယ် ကူကူပြီးချင်တယ်ဆိုရင် ဒီတိုင်း ယူသုံးလိုက်ယုံပဲ။
နောက်ပြီး ခင်ဗျားတို့ အဖွဲ့က လုပ်မယ်ဆိုတာက တကယ်တတ်အောင် လုပ်ချင်တာလား။ ဒါမှမဟုတ် ဒီ project လေး ပြီးရင် ရပါပြီဆိုတဲ့ သဘောကို လုပ်ချင်တာလား။ တကယ်တတ်အောင် လေ့လာမယ်ဆိုရင်တော့ အားမနာတမ်း ပြောရမယ်ဆိုရင် မလွယ်ပါဘူး။ dynamic ဖြစ်နေဖို့အတွက် အနည်းဆုံး ခင်ဗျားတို့ php လောက်နဲ့ ရေးရမယ်။ database နဲ့လည်း တွဲတတ်ရမယ်။ တစ်လလောက် အချိန်အတွင်းနဲ့ အစကလေ့လာဖို့တော့ သိပ်မလွယ်ပါဘူး။ project လေး ပြီးရင် ရပါပြီဆိုရင်တော့ လွယ်တယ်။ social network site ပုံစံရေးထားတဲ့ package လေး တစ်ခုသုံးလိုက်ယုံပဲ။ Facebook နဲ့ တစ်ပုံစံတည်း တူတဲ့ package တစ်ခုကို ကျွန်တော် သုံးဖူးတယ်။ အဲဒါလေး ကို သုံးလိုက်ရင် ရပြီ။ (ဂိုဂယ်မှာ အလွယ်တကူ ရှာကြည့်လို့ ရပါတယ်။) ကိုယ့်ဘာသာ ရေးထားသလိုတော့ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ သိပ်မရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဟိုပြင် ဒီပြင် နည်းနည်းလုပ်လိုက်ရင်တော့ project လေး တစ်ခုကတော့ သက်သက်သာသာ ပြီးသွားနိုင်ပါတယ်။
p.s ( ကိုယ်ဘာသာ package လေးတွေ ရေးတာကို မကောင်းဘူးလို့ ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ ကျွန်တော်လည်း ကျောင်းသားဖြစ်နေတဲ့ အတွက် ခဏ၊ ခဏ project သေးသေးလေးတွေ လုပ်နေရတော့ ခေါင်းပူရတဲ့ ဘ၀ကို နားလည်လို့ အကြံပေးတာပါ။ ကို့ဘာသာ ရေးတာကတော့ အကောင်းဆုံးပေါ့ဗျာ...)
JSP ကော.... Database ပိုင်းကောသင်ပြီးပြီလား..... JSP မတတ်ရင်တော့ dynamic site ရေးလို့မရဘူး။ database driven အပိုင်းတွေ ရေးလို့မရဘူး။ အကုန် java ကြီးနဲ့ပဲ လုပ်ရမယ်ဆိုရင်ပြောတာပါ။
နောက်ပြီး ခင်ဗျားတို့ အဖွဲ့က လုပ်မယ်ဆိုတာက တကယ်တတ်အောင် လုပ်ချင်တာလား။ ဒါမှမဟုတ် ဒီ project လေး ပြီးရင် ရပါပြီဆိုတဲ့ သဘောကို လုပ်ချင်တာလား။ တကယ်တတ်အောင် လေ့လာမယ်ဆိုရင်တော့ အားမနာတမ်း ပြောရမယ်ဆိုရင် မလွယ်ပါဘူး။
ဟုတ်ပါတယ် အစ်ကို ။ မလွယ်လောက်ပါဘူး ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို ့က တကယ်တတ်အောင်လုပ်မှာပါ ။ ခက်ခဲမယ်ဆိုပေမဲ့ မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ် လို ့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ် ။ လိုအပ်တာတွေကိုလဲ လေ့လာသွားမှာပါ ။ ကျွန်တော်က J2SE Desktop Application Project တစ်ခုနဲ့J2EE Project တစ်ခုလုပ်ဖူးပါတယ် ။ Database နဲ ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲ ကျွန်တော်က အရင် Project တွေ မှာ MySQL ကိုသုံးဖူးပါတယ် ။ အခုလဲ အဲဒါကိုပဲ သုံးမှာပါ ။ (ကျွမ်းတော့မကျွမ်းပါဘူး သုံးတတ်ယုံပါ ။ )
social network site ပုံစံရေးထားတဲ့ package လေး တစ်ခုသုံးလိုက်ယုံပဲ။ Facebook နဲ့ တစ်ပုံစံတည်း တူတဲ့ package တစ်ခုကို ကျွန်တော် သုံးဖူးတယ်။ အဲဒါလေး ကို သုံးလိုက်ရင် ရပြီ။ (ဂိုဂယ်မှာ အလွယ်တကူ ရှာကြည့်လို့ ရပါတယ်။)
ကိုယ့်ဘာသာ ရေးထားသလိုတော့ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ သိပ်မရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဟိုပြင် ဒီပြင် နည်းနည်းလုပ်လိုက်ရင်တော့ project လေး တစ်ခုကတော့ သက်သက်သာသာ ပြီးသွားနိုင်ပါတယ်။
တစ်ကယ်လို့လုပ်ရကိုင်ရတာ အရမ်းကြီးကိုခက်လာပြီး အချိန်အရပါ ဘယ်လိုမှမမှီတော့ ရင်တော့ အစ်ကိုပြောသလိုပဲ လုပ်ရမှာပါ ။
ဟုတ်ပါတယ် ။ Intro မှ တကယ့် Intro လောက်ပါပဲ ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို ့အတွက်ကံကောင်းတာက ကျောင်းက ကျွန်တော်အတွက် အဆင်ပြေအောင်ဆိုပြီး တော်တော်လေးကို ကောင်းတဲ့ Library လေးတစ်ခု စီစဉ်ပေးထားပါတယ် ။ အနည်းဆုံး ၂၀၀၆ ထုတ်စာအုပ်လောက် ကနေ ၂၀၀၈ ထုတ်လောက် တွေကိုပဲ ထားပြီးစီစဉ်ပေးထားပါတယ် ။
အခုလိုမျိုးအကြံပေးကြတဲ့ အတွက် အစ်ကို ့ကိုရော ကိုစေတန်ကိုပါကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။ နောက်ထက်လဲ ကျွန်တော်နဲ ့့သင့်တော်မဲ့ အကြံဉာဏ်တွေ ပေးကြပါဦး ။ အစ်ကိုတို ့အတွေ ့အကြုံ စုံတဲ့လူတွေ ၀ိုင်းပြီး ပေးတဲ့ အကြံဉာဏ်တွေက ကျွန်တော်တို ့လိုကြိုးစားစ လူတွေ ကို အများကြီးထောက်အကူပြုပါတယ် ။ :)
ဟုတ်ကဲ ့ကျွန်တော်တို ့သင်ရမှာပါ ။ အခုတော့ ကျွန်တော်တို ့ကို Core Java သင်ပြီးသွားပါပြီ ။ ၂၅ ရက်နေ့Servlet and JSP စသင်ရမှာပါ ။ အဲဒီမှာပဲ Java နဲ ့Database နဲ ့ချိတ်တာတွေ သင်မယ်တဲ့ ။ Database သက်သက်ကိုတော့ ကျွန်တော်တို ့ကို Oracle သင်ပါတယ် ။ 10g ပါ ။ ရှေ့ပိုင်း SQL နဲ ့ပတ်သက်တဲ့ ဟာတွေနဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ PL/SQL သင်ပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို ့ကတော့ MySQL ပဲ သုံးဖို ့စဉ်းစားထားပါတယ် ။ Oracle ကို ကောင်းကောင်းမသုံးတတ်လို ့ပါ ။
ကျွန်တော်ကို Social Network လုပ်တဲ့ အခါ Servlet & JSP ဘယ်အပိုင်းတွေ က အရေးကြီးတယ််ဆိုတာတွေရယ် .. ဒိပြင့် technology တွေထဲက ဘယ် ဟာတွေ က အရေးကြီးတယ်ဆိုတာရယ် .. အစ်ကိုကူညီနှိင်ရင် နဲနဲ လမ်းညွှန်ပေးပါဦး .. ကျွန်တော် နဲနဲ ကြိုလေ့လာထားချင်လို ့ပါ ။ (စာအုပ်အညွှန်းလေးပါ ပါရင်ပိုကောင်းပါတယ် ဟီး ၊ ကျွန်တော်က J2EE သင်တန်းတစ်ခုတော့အရင်က တက်ဖူးပါတယ် ။ ) ။
MZ မှာ ဦးဦး ဒေါ်ဒေါ် ကိုကို မမ တို ့ခင်ဗျား .. (ကိုစေတန် တို့ကို Yemin တို ့အပါအ၀င် )
Social Networking နဲ ့ပတ်သက်တဲ့ Service လေး တွေ .. (မဖြစ်မနေ ထည် ့ကြတဲ့ Service လေးတွေ ) ကျွန်တော့်ကို နဲနဲ လောက် 'မ' စ ကြပါလား ခင်ဗျား .. ။
ဘယ်လို Service လေးတွေထည့်ကြတယ်ဆိုတာရယ် ဘာကြောင့်ထည့်ကြတယ် ဆိုတာလေး ပါမသိနားမလည်တဲ့ ညီလေးကို ပြောပြကြပါလား .. ခင်ဗျား .. ။
Social Network တွေက တော်တော်များများရှိကြတော့ Social Network တစ်ခုအနေနဲ ့မဖြစ်မနေ ထည့်ကြတဲ့ Service တွေတော့ ရှိမှာပါ .. ။ ကျွန်တော်က အတွေ ့အကြုံမရှိတော့ မသိဘူးခင့်ဗျာ့ :2::2: ။
ကိုစေတန်ရဲ ့အရင် Project နှစ်ခုက Social Network ဆိုတော့ အဲဒီ ဘိုးတော်ကြီးက သိမှာပါ .. ။ ကူညီကြ..... ပါ ...... :2::2: ။
(မကူညီရင်ငိုမှာ .. )
I told about that follow by facebook.
1. What on your mind ? (status sharing)
3. Video Gallery.
4. Link Sharing.
5. All the above need comment system.
ကျွန်တော့် အကြမ်းလုပ်နေတဲ့ Social Networking System မှာ အပျင်းပြေဆော့လို ့ရမဲ့ Game အသေးစားလေးတွေ ထည့်ချင်ပါတယ် ။ Facebook တို့Tagged တို ့မှာလို ပေါ့ .. ။ သူတို ့ကတော့ Mafia Wars လို Game အကြီးစား ကြီးတွေကို Zynga ကနေ တင် တာပါ ။ ကျွန်တော်က အပျင်းလဲ ပြေ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့လုပ်လို ့လဲ လွယ်မယ့် Game တစ်ခု နှစ်ခုလောက်ကို Free ရမယ့် site တစ်ခုခု က (Zynga ဆီက ယူကြသလို) ယူပြီးပဲဖြစ်ဖြစ် (ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ်) တင်ချင်လို ့ပါ ။ နဲနဲ လောက်လမ်းညွန်ပေးပါဥိး .. ။ ကိုစေတန်တို ့ရောအရင် Project တုံးက Game တွေ ဘာတွေ ထည့်လား ... ။ ထည့်တယ်ဆိုရင် ကိုစေတန်တို ့အတွေ ့အကြုံလေးလဲ သိချင်ပါတယ် :D။
Ko Wanna ရေ
အကို ဆိုရှယ် ဆိုဒ်လေးပြီးသွားရင်တော့ ပြပါဦးနော်
ကိုစေတန်တို့ ကိုရဲမင်း တို့ အကြုံ ဉာဏ် လေးတွေပါ ယူပြီးတော့ ရေးထားတဲ့ ဆိုဒ်ဆိုတော့ စိတ်၀င်စားလို့ပါ
ပြီးတော့ ေ၀ဖန်ကြည့်ချင်တယ် ( ဟီးဟီး ကိုယ်ကိုတိုင်သာမတတ်တာ )
အကိုယ်တို့ ရေးထားတဲ့ ပို့စ်တွေကို လိုက်ဖတ်တာ ကျွန်တော် မသိတာတွေ တော်တော်များသေးတာပဲ ဆိုတာ သိလာရတယ်
Ko Wanna wrote: »
if you want to do like that, you need to release API for developer. That is notaeasy thing. Another way, just add flash game. By the way, just add yourself or developer will add ? If you will add yourself, easiest and fastest way it add flash game.
Joomal ကိုအစကတော့သုံးကြည့်တယ်ဗျ။ ခုတော့ Drupal ကိုသုံးနေတယ်။ အဲ့ ကလိနေတာကိုပြောတာနော်။ Joomla ကအဆင်မပြေသလို့ပဲ။ သူတို့၂ ခုဘာတွေကွာလဲ ခုထိမသိသေးဘူး။ အားနည်းချက်အားသာချက်လေးပြောပြကြပါအုံး။
Drupal is stronger than Joomla
1.The concepts of coding are inadifferent level than Joomla. The framework isareal framework and we are expecting to become the most powerful framework behindaCMS with the use of Symphony at Drupal 8.